म्याकको लागि प्रतिलिपि गर्नुहोस् #1 प्रतिलिपि गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस् मल्टिक्लिप प्रबन्धक | बेर अचम्मको
म्याकको लागि प्रतिलिपि गर्नुहोस् #1 प्रतिलिपि गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस् मल्टिक्लिप प्रबन्धक
नवीनतम:6/ 25 / 22
आवाश्यक हुन्छ: म्याक 10.15-12.0+
म्याकको लागि प्रतिलिपि गर्नुहोस् - बहु क्लिपबोर्ड एप प्रतिलिपि गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस् - २०२२ को लागि नयाँ!
People use copy and paste तिमीSands of tiमेरोaweek। The regउरल clipbओर्ड is गलेely important but just जस्तैgle clipbओर्ड that डिसादेखा पर्दछ with eअच copy is no longer good enoउह। CopyPaste was the fiपहिलो and most पपउरल धेरैiple clipbओर्ड उपयोगीity to retain धेरैiple clipboards that can be विवादराखिएको, आर्कived र एडीटेड। With प्रतिलिपि पीअस्टे each copy is सम्झनाबेर्ड inaclip history। It's likeatime machine for the clipboard See and edit any clआईपी Save धेरैiple clips थ्रोugh बाँकीकला। OCR text to the clipboard एक्टीon हरू to act on clips। Clip sets for उमालेrplate text & अकादमीGES you use often। एनहाnces उत्पादनtivity। वृद्धिdibly प्रयोगपूर्ण NeVer loseaclipbओर्ड agaमा। A time saver & life saver for all Mac users siNCE the last प्रतिशतury (1996)।
* यदि पहिलो केही अक्षरहरू बोल्ड छन् भने, माथि जस्तै, यो सोचाइन्छ कि यसले पढ्ने गति र समझ बढाउँछ।
म्याकको लागि प्रतिलिपि गर्नुहोस् #1 प्रतिलिपि गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस् मल्टिक्लिप प्रबन्धक मात्रा
नयाँ प्रतिलिपि पेस्ट
बहु प्रतिलिपि टाँस्नुहोस् क्लिपबोर्ड प्रबन्धक, अब म्याकको लागि
म्याक ओएसका धेरैजसो भागहरू दशकहरूमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएका छन् तर एउटा महत्त्वपूर्ण भाग, सुरुदेखि नै प्रायः अपरिवर्तित रहेको छ। त्यो क्लिपबोर्ड हो।
क्लिपबोर्डमा धेरै अप्रयुक्त क्षमता छ। धेरै मानिसहरू क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्छन् र क्लिपबोर्डबाट हप्तामा सयौं पटक टाँस्छन्। हामी सबैलाई यो क्षमता मनपर्छ र अझै पनि हामी सीमितताहरू महसुस गर्छौं। के हुन्छ यदि हामीले तपाइँलाई क्लिपबोर्ड खोल्न सकिन्छ र यो सम्भावित प्रकट भएको छ भने?
म्याक एक चयन गरिएको वस्तु क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्न र फरक स्थानमा टाँस्ने क्षमताको साथ आउँछ। नियमित म्याक क्लिपबोर्ड उपयोगी छ तर दुर्भाग्यवश केवल एक क्लिपबोर्डमा सीमित छ। जब तपाइँ नयाँ प्रतिलिपि बनाउनुहुन्छ यसले अघिल्लो प्रतिलिपि बिर्सन्छ। क्लिपबोर्ड रहस्यमय रूपमा पृष्ठभूमिमा लुकेको छ। तपाईंले अघिल्लो प्रतिलिपिहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले प्रतिलिपि सम्पादन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले प्रतिलिपि पनि हेर्न सक्नुहुन्न। यद्यपि, प्रतिलिपि र टाँस्ने क्षमता अझै पनि म्याकमा सबैभन्दा उपयोगी विश्वव्यापी सुविधाहरू मध्ये एक हो।
CopyPaste ले ती सबै छुटेका सुविधाहरूको साथ मानक क्लिपबोर्डलाई बढाउँछ।
एकपटक तपाईंले CopyPaste सुरु गरेपछि, प्रत्येक प्रतिलिपि क्लिप इतिहासमा सम्झिन्छ। CopyPaste क्लिपबोर्डको लागि टाइम मेसिन जस्तै हो। आज, हिजो वा गत महिनाबाट कुनै पनि प्रतिलिपि गरिएको क्लिप हेर्नुहोस् र सम्पादन गर्नुहोस्। पुन: सुरु मार्फत सबै प्रतिलिपि क्लिपहरू बचत गर्नुहोस्। OCR पाठ क्लिपबोर्डमा सीधा। CopyPaste मा 'Actions' छ जसले डाटालाई क्लिपमा हजारौं तरिकामा रूपान्तरण गर्न सक्छ। क्लिप सेटहरूले बॉयलरप्लेट पाठ र छविहरूलाई संग्रह गर्न र कायम राख्न सेटहरूमा उपयोगी क्लिपहरू व्यवस्थित गर्न अनुमति दिन्छ जुन तपाईंले प्राय: प्रयोग गर्नुहुन्छ।
फेरि कहिल्यै क्लिपबोर्ड नहराउनुहोस्। उत्पादकत्व बढाउनुहोस्। अविश्वसनीय उपयोगी। पछिल्लो शताब्दी (1996) देखि सबै म्याक प्रयोगकर्ताहरूको लागि समय बचत र जीवन बचतकर्ता र नवीनतम एप्पल प्रविधिहरूसँग अद्यावधिक गरिएको र 2022 को लागि स्विफ्टमा पुन: लेखिएको।
CopyPaste ले यी सबै सुविधाहरू थपेर तपाइँको उत्पादकता बढाउनको लागि सामान्य प्रतिलिपि र टाँस्नुहोस्:
क्लिप इतिहास - फेरि कहिल्यै नबिर्सनुहोस्।
रिस्टार्ट मार्फत सबै विगतका क्लिपहरू सम्झन्छ।
प्रत्येक क्लिपको सामग्री प्रतिलिपि पेस्ट मेनुमा देखिने छ।
हटकुञ्जी होल्ड गरेर थप सामग्री, सम्पूर्ण पृष्ठहरू, फोटोहरू र वेबसाइटहरूको पूर्वावलोकन गर्नुहोस्।
मेनुमा प्रत्येक क्लिप विभिन्न तरिकाले टाँस्न सकिन्छ।
टाँस्न मेनुमा रहेको क्लिपमा ट्याप गर्नुहोस्
हटकी र क्लिप नम्बर टाइप गरेर टाँस्नुहोस्
हटकी क्लिप # – क्लिप # मार्फत क्लिपहरूको अनुक्रमहरू टाँस्नुहोस्
क्लिप इतिहास र कुनै पनि क्लिप सेटबाट टाँस्नुहोस्
निश्चित 'कार्यहरू' मार्फत रूपान्तरित क्लिपहरूबाट टाँस्नुहोस्
क्लिप सेटहरू उपयोगी थप स्थायी क्लिपहरूको सेटहरू हुन्।
एक्स्ट्र्याक्ट, कन्भर्ट, ट्रान्सलेट, क्लीन, इन्सर्ट, क्रमबद्ध, तथ्याङ्क, उद्धरण र URL जस्ता कार्यहरूको बढ्दो संख्याको साथ क्लिपहरू रूपान्तरण गर्नुहोस्...
कार्यहरू मुख्य क्लिपबोर्डमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, क्लिप ०।
क्लिप इतिहास वा कुनै पनि क्लिप सेटमा कुनै पनि क्लिपमा पनि।
तपाईंले निर्णय गर्दा कुनै पनि क्लिप मेटाउनुहोस्।
सबै क्लिपहरू र क्लिप सेटहरू ब्याकअप गर्नुहोस्।
iCloud र अन्य तरिकाहरू मार्फत तुरुन्तै क्लिपहरू साझेदारी गर्नुहोस्।
क्लिप प्रबन्धकहरूले क्लिपहरू प्रदर्शन गर्न, सम्पादन गर्न र क्लिप सेटहरू बीचको क्लिपहरूलाई ड्र्याग र ड्रप गर्न अनुमति दिन्छ।
क्लिपमा स्क्रिनमा कहीं पनि OCR पाठ।
पासवर्ड प्रबन्धकहरूको गोपनीयता कायम राख्छ।
क्लिपहरूमा इमोजीहरू सजिलै पाउनुहोस्।
ढाँचा गरिएको पाठको कुनै क्लिप टाँस्नुहोस्, सादा पाठको रूपमा, हटकी प्रयोग गरी कुनै पनि एपमा।
यसको मेनुबाट प्रयोग गर्न सजिलो, तपाईंले विगतको अनुभवबाट पहिले नै थाहा भएको कुरा विस्तार गर्दछ।
गहिरो बुझ्नको लागि राम्रो मद्दत/म्यानुअल
कुनै पनि एपमा क्लिप सामग्री खोल्नुहोस्।
कुनै पनि एपमा क्लिप सामग्री साझेदारी गर्नुहोस्।
मुख्य क्लिप ० मा असीमित चयनहरू जोड्नुहोस्।
क्लिपबोर्ड इतिहास र प्रत्येक क्लिप सेटमा सबै क्लिपहरू नम्बर गर्नुहोस्।
हटकी र क्लिपको संख्या मार्फत टाँस्नुहोस्।
क्लिपसेटहरू बीच क्लिपहरू सार्नुहोस्।
हटकीको साथ क्लिपमा URL खोल्नुहोस्।
क्लिप इतिहासमा राखिएको पेस्टबोर्ड प्रकारहरू नियन्त्रण गर्नुहोस्।
मेनु वा हटकी द्वारा सेट गरिएको कुनै पनि क्लिपबाट सीधा टाँस्नुहोस्
एकै पटकमा विभिन्न क्लिपहरूको कुनै पनि संख्या टाँस्नुहोस्
आउन बाँकी धेरै…
कुनै समय एपहरू बहु-कार्यकारी थिएनन्। तपाईंले एक पटकमा एउटा एप प्रयोग गर्नुहुनेछ। यी 'पहिलेको समय' मा साझेदारी गर्न गाह्रो थियो। यस प्रारम्भिक सीमालाई पार गर्न Mac OS प्रणाली क्लिपबोर्ड प्रयोग गर्ने पहिलो थियो। प्रणाली क्लिपबोर्डले एउटा एपमा 'सिस्टम क्लिपबोर्ड' मा टेक्स्ट वा ग्राफिक प्रतिलिपि गर्न, त्यो एप छोड्ने, अर्को एप सुरु गर्ने र त्यही 'सिस्टम क्लिपबोर्ड' बाट टाँस्ने अनुमति दियो। त्यो समयमा यो एक क्रान्तिकारी आविष्कार र उत्पादकता वृद्धि थियो।
त्यस समयको बारेमा हामी मौलिक CopyPaste को साथ बाहिर आयौं जसले म्याकलाई कुनै पनि एप भित्रबाट धेरै क्लिपबोर्डहरू प्रयोग गर्न र सम्झन अनुमति दियो। यसले 10 क्लिपहरू सम्झ्यो र कुनै पनि कम्प्युटरको लागि पहिलो बहु-क्लिपबोर्ड उपयोगिता थियो। यो धेरै लोकप्रिय भयो। ओभरटाइम नयाँ सुविधाहरू थपियो, अतिरिक्त क्लिपहरू, क्लिपहरूमा कार्यहरू जस्ता थप सुविधाहरू, क्लिप इतिहासमा अतिरिक्त क्लिपसेटहरू थपियो। दशकौं बित्यो, अब २०२१ मा प्रतिलिपि पेस्टको अर्को पूर्ण पुनर्लेखन भएको छ। पुरानो Mac OS क्लिपबोर्ड उस्तै छ तर कसैले यसलाई CopyPaste थपेर अपग्रेड गर्न सक्छ।
जेरोक्स पार्कमा ईतिहास कपी गर्नुहोस् र टाँस्नुहोस्
Wikipedia बाट "प्रारम्भिक रेखा र चरित्र सम्पादकहरूबाट प्रेरित हो जसले एक चाल वा प्रतिलिपि अपरेशनलाई दुई चरणहरूमा तोड्यो - जसको बीचमा प्रयोगकर्ताले नेभिगेसन जस्ता पूर्व तयारी कार्यहरू बोलाउन सक्छ - लरेन्स जी। "ल्यारी" टेस्लरले "कट" र "प्रतिलिपि" नामहरू प्रस्ताव गरे। "पहिलो चरणको लागि र दोस्रो चरणको लागि" टाँस्नुहोस्। 1974 मा सुरु गर्दै, उनी र जेरोक्स कर्पोरेशन पालो अल्टो रिसर्च सेन्टर (PARC) मा सहकर्मीहरूले धेरै पाठ सम्पादकहरू लागू गरे जसले पाठ सार्न/प्रतिलिपि गर्न कट/प्रतिलिपि-र-पेस्ट आदेशहरू प्रयोग गरे।
एप्पल क्लिपबोर्ड ईतिहास
२th जनवरी १ 24। 1984 मा, एप्पलले म्याक प्रस्तुत गर्‍यो। म्याकको अद्वितीय क्षमता मध्ये एक क्लिपबोर्ड थियो, जसले तपाईंलाई एक अनुप्रयोगबाट जानकारीको प्रतिलिपि गर्न र त्यस जानकारीलाई अर्को अनुप्रयोगमा टाँस्न अनुमति दियो। म्याक र लिसा भन्दा पहिले (अर्को एप्पल कम्प्यूटर मोडेल) अपरेटि systems प्रणालीसँग कुनै अन्तर-अनुप्रयोग संचार थिएन। क्लिपबोर्ड १ 1984।। मा क्रान्तिकारी थियो। यो प्रतिलिपि, काट्ने र टाँस्ने र आ क्लिपबोर्डको प्रयोग मात्र पाठ मात्र नभई धेरै मिडिया प्रकारहरूको पहिलो लोकप्रिय थियो।
हामीले ब्रुस हर्नलाई (म्याक खोजकको सिर्जनाकर्ता; तल हेर्नुहोस्) कम्प्युटर विज्ञानमा क्लिपबोर्डको ईतिहासको बारेमा केहि पोइन्टहरू सोध्यौं।
"काट्ने / टाँस्ने विचार सानोटालकमा अवस्थित थियो (सबै मोडलेसिंग अवधारणा अवधारणा जस्तो गरी), तर देखिने क्लिपबोर्ड एप्पलद्वारा सिर्जना गरिएको हो। मलाई थाहा छैन मैले अन्तिम चीज कटेको सामग्री देखाउने कसले सोचेको थियो; त्यो लिसा समूहबाट बाहिर आयो, त्यसैले हुन सक्छ ल्यारी टेस्लरलाई थाहा छ। टेस्लर पनि PARC मा मोडप्लेस टेक्स्ट संपादनको आरम्भकर्ता थियो जुन उनको जिप्सी सम्पादकको साथ थियो, जुन पछि सानोटाक प्रणालीमा आयो। क्लिपबोर्डमा बहु बिभिन्न तर एकै साथ प्रकारको विचार मेरो विचार हो (उदाहरणका लागि पाठ + चित्र, उदाहरणका लागि) र फोर बाइट रिसोर्स प्रकार प्रयोग गर्‍यो, र पहिलो पटक म्याकमा गरियो। मलाई लाग्छ कि एन्डी एच वा स्टीव क्याप्सले वास्तवमै म्याकमा क्लिपबोर्ड (जस्तै स्क्र्याप प्रबन्धक) को लागी कोड लेख्यो। Ru ब्रुस हर्न २००१।
क्लिपबोर्डको ईतिहासको बारेमा सोध्न एक निश्चित व्यक्ति ब्रुस होर्न हो किनभने उनी म्याकिन्टोश सिर्जना गर्ने मूल टोलीका सदस्य थिए। उहाँ फाइन्डर, संसाधन प्रबन्धक, संवाद प्रबन्धक, फाईलहरू र अनुप्रयोगहरूको लागि प्रकार / क्रिएटर संयन्त्र, र बहु-प्रकारको क्लिपबोर्ड डिजाइन, म्याकिन्टोस ओएसमा निर्मित अन्य वास्तु आविष्कारहरूका बीच डिजाइन र कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार थिए। उनले कम्प्युटरमा धेरै घण्टा काम गरे जुन रम मेमोरीको थोरै मात्रामा थियो जुन हामी सबैले प्राप्त गर्न थाल्यौं धेरै चीजहरू बनाउन।
ब्रूसलाई १ of वर्षको उमेरमा टेड काहलरले स्मालटाकमा केही प्रोग्रामिंग प्रयोगहरू गर्न, एलन केको लर्निंग रिसर्च ग्रुपमा सत्तरको दशकको मध्यतिर झेरोक्स पालो अल्टो रिसर्च सेन्टर (पीएआरसी) मा लर्निंग रिसर्च ग्रुपमा भर्ती गरिएको थियो। सन् १ 14 1981१ को उत्तरार्धमा उहाँ म्याक टोलीमा सामेल हुनुभएपछि, उनी वस्तु केन्द्रित प्रोग्रामिंग र ग्राफिकल प्रयोगकर्ता इन्टरफेसमा विशेषज्ञ थिए। ब्रुस एलोवेन्ट, इंकमा काममा गयो। एडोब सिस्टम इंकमा पहिलो कर्मचारीहरू मध्ये एक थियो; माया डिजाइन समूह; र अझै पनी ओस्लो, नर्वे मा औद्योगिक अनुसन्धान संस्थान।
हामीले स्टीव क्याप्सलाई पनि सोध्यौं (म्याकको निर्माण गर्ने अर्को मूल टीम) र उनले भनेको पनि यही थियो: “हामी तीन जना, ब्रुस, एन्डी र स्टीव (ब्रुस हर्न, एन्डी हर्ट्जफेल्ड र स्टीभ क्याप्स) हुनसक्छ हामी यहाँ दबिएका थियौं र त्यहाँ, तर एन्डीले प्रारम्भिक विमोचनमा बहुसंख्यक कोड लेख्यो (यसका केही सय बाइट्स)। उनले स्क्र्यापबुक डेस्क सहायक पनि लेखे जुन तपाईंलाई एन-डीप क्लिपबोर्ड अनुकरण गर्न दिन्छ। ब्रुसले वास्तवमा उही डाटा विचारको बहु प्रतिनिधित्वको लागि क्रेडिट प्राप्त गर्नु पर्छ - त्यो लिसामा थिएन जहाँसम्म मलाई थाहा छ "। ~ स्टीव क्याप्स २०० 2006।
यदि कसैसँग क्लिपबोर्डको इतिहासको बारेमा थप बिन्दुहरू वा स्पष्टीकरणहरू छन् भने, कृपया हामीलाई लेख्नुहोस् र भन्नुहोस्। हामी सधैं चासो राख्छौं।
एप इतिहास प्रतिलिपि गर्नुहोस्
CopyPaste, पहिलो बहुविध क्लिपबोर्ड उपयोगिता, 1993 मा Peter Hoerster द्वारा सिर्जना गरिएको थियो। Mac को लागि CopyPaste पहिलो संस्करण थियो। उसले प्रोग्रामिङ सुरु गर्नुको कारण आफ्नो कम्प्युटरमा हालको बहाई मिति उत्पन्न गर्नु मात्र थियो (पिटर एक बहाई हो)। यो गर्न सिक्नको लागि रमाइलो गरेपछि, उनले प्रोग्रामिङ जारी राखे, र परिणाम Mac OS 7, 8, 9, 10 र 11 को लागि अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय CopyPaste थियो।
म्याकहरू केवल 1 क्लिपबोर्डसँग आउँछन् र प्रत्येक पटक तपाईंले प्रतिलिपि बनाउनुहुँदा सबै अघिल्लो क्लिप जानकारीहरू सदाको लागि हराइन्छ। CopyPaste परिवर्तन हुन्छ किनभने यसले पृष्ठभूमिमा काम गर्छ र 'क्लिप इतिहास' सिर्जना गर्ने सबै प्रतिलिपिहरू र कटौतीहरूलाई सम्झन्छ। त्यो आधारभूत जानकारी हो तर त्यहाँ छ धेरै अधिक ...
बिल्कुल आवश्यक। म दिनमा कति पटक कपीपेस्ट प्रयोग गर्छु भनेर गणना गर्न सक्दिन। - जेम्स फिट्ज, लामो समयको प्रतिलिपि पेस्ट प्रयोगकर्ता
CopyPaste एक र मात्र, पुरस्कार विजेता, प्रयोग गर्न सजिलो, बहु क्लिपबोर्ड सम्पादन, प्रदर्शन र अभिलेख उपयोगिताको नवीनतम अवतार हो। विभिन्न दृष्टिकोणबाट क्लिपहरू हेर्नको लागि नयाँ क्लिप ब्राउजर (तेर्सो ब्राउजर) वा क्लिप प्यालेट (ठाडो ब्राउजर) प्रयोग गर्नुहोस्। क्लिपबोर्ड डेटामा तत्काल कार्य गर्न 'कपीपेस्ट उपकरणहरू' प्रयोग गर्नुहोस्। पुन: सुरु मार्फत सबै क्लिपबोर्डहरू बचत गर्नुहोस्। एउटा क्लिपबोर्डमा सीमित नहुनुहोस् र फेरि कहिल्यै क्लिप नहराउनुहोस्। CopyPaste सबै म्याक प्रयोगकर्ताहरूका लागि शुरुआतीदेखि उन्नत रूपमा समय बचत गर्ने/जीवन रक्षक हो। आफ्नो म्याकको सम्भाव्यता विस्तार गर्नको लागि CopyPaste प्रयास गर्नुहोस्, कम गर्न सुरु गर्नुहोस् र धेरै पूरा गर्नुहोस्।
कपिपास्ट म्याकको लागि मूल बहु क्लिप उपयोगिता हो। आफ्नो पहिलो विमोचन पछि प्रतिलिपिपास्ट व्यापक लोकप्रिय छ। कुन कुराले यसलाई यति व्यापक रूपमा प्रशंसा गर्यो? उपयोगिता। कपिपास्टले नम्र क्लिपबोर्डको उपयोगितालाई म्याग्निफाई र गुणा गर्दछ र यसले पृष्ठभूमिमा अदृश्य रूपमा गर्दछ।
१ 1984 in XNUMX मा म्याकको साथ आएका क्रान्तिकारी सुविधाहरू मध्ये एउटा पाठ वा तस्विरहरू आदि चयन गर्न अनौठो क्षमता हो, त्यस डाटालाई क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्, त्यस सामग्रीलाई अस्थायी रूपमा समात्नुहोस् र त्यसपछि समान अनुप्रयोग वा फरकमा पेस्ट गर्नुहोस्। क्लिपबोर्ड म्याक मा प्रोग्रामहरू बीच सबै प्रकारका जानकारी स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गरियो, र पछि यो सुविधा धेरै अन्य अपरेटिंग प्रणालीहरूमा नक्कल गरियो।
केही वर्ष पछि प्रतिलिपिपास्ट त्यो एकल क्लिपबोर्ड लिने र बहु ​​क्लिपबोर्डहरू थप्न यसलाई विस्तार गर्ने पहिलो व्यक्ति हो। यसको मतलब भनेको कम डाटामा थप डाटा सारियो। CopyPaste ले यी बहु क्लिपबोर्डहरू प्रदर्शन, सम्पादन, अभिलेख र पुनःस्टार्ट मार्फत बचत गर्न अनुमति दिईयो। कपिपास्टले म्याक क्लिपबोर्डको अप्रयुक्त सम्भाव्यता देखायो।
प्रतिलिपि पेस्ट सुविधाहरू
यो बिना म्याक छैन! - माइकल जे वारेन
बिल्कुलै आवश्यक। म एक दिनको प्रतिलिपि गर्न प्रयोग गर्न सक्दिन। - जेम्स फिट्स
धन्यवाद एक महान र अपरिहार्य सफ्टवेयर को टुक्रा को लागी धन्यवाद! मलाई लाग्छ कि यो कल्पित छ! - डान स्यानफिलीपो
यो बिना बाँच्न सक्दैन !!! राम्रो उत्पादन! यो अपरिहार्य छ र यसको विकासको लागि धन्यबाद! - रोजर Euchler
"म सधैं CopyPaste प्रयोग गर्छु! यो मेरो Mac मा एकल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एड-अन सफ्टवेयर हो! - एलान अपुरिम
CopyPaste: एकचोटि तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुभयो, तपाईं यसलाई बिना कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ! - प्रो. डा. गेब्रियल डोराडो, आणविक जीवविज्ञान र जैव सूचना विज्ञान
महत्त्वपूर्ण: यदि तपाइँलाई 'अद्यावधिकहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्' प्रयोग गरेर स्थापना गर्न समस्या छ भने, यो लिङ्क प्रयोग गरेर नवीनतम CopyPaste डाउनलोड गर्नुहोस्:
त्यो समस्या ०.९.६९ भन्दा पुरानो संस्करण प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्र हुनेछ
यदि कार्य मेनुमा मेनु वस्तु खैरो छ भने यसको मतलब यो छिट्टै आउने प्रकार्यको लागि प्लेसहोल्डर हो।
- क्लिपमा सामग्रीको आधारमा (पेस्टबोर्ड प्रकार) विभिन्न कार्यहरू प्रदर्शित हुन्छन्। त्यसैले, उदाहरणका लागि, यदि छवि क्लिप ० मा छ भने मेनुले छविहरूमा काम गर्ने कार्यहरू देखाउनेछ, उदाहरण, 'रिसाइज'। पाठको लागि, पाठ कार्यहरू देखाइन्छ, उदाहरण, 'UPPERCASE'। url को लागि, url कार्यहरू देखाइन्छ, उदाहरण, 'shorten url'।
- कार्य मेनु अब क्लिप प्रबन्धक मा काम गर्दछ। क्लिप प्रबन्धकमा कुनै पनि क्लिपमा कार्यहरू प्रयोग गर्न क्लिपमा नियन्त्रण र ट्याप गर्नुहोस्। यो उही कार्य मेनु हो जुन तपाईंले प्रतिलिपि पेस्ट मेनुमा पाउनुहुनेछ।
- एक आधारभूत छवि रिसाइज स्क्रिनसटहरूको लागि सजिलो थपियो। तपाईं एप्पल पूर्वावलोकन एप वा पिक्सेलमेटर वा एफिनिटी उत्पादनहरू जस्ता उत्कृष्ट एपहरूमा जान सक्नुहुन्छ तर छवि क्लिपहरूको लागि यो साँच्चै उपयोगी छ जुन 4000x4000 छ तर इमेलमा 800x 800px मा राम्रो देखिन्छ।
- एप्पल एप स्टोर संस्करणमा धेरै फिक्सहरू
- गाढा मोड मुद्दाको लागि सानो समाधान
- कार्य मेनुमा धेरै वस्तुहरू जसले काम गरेन, अब काम गर्दछ। उदाहरण, 'open with...' अब तपाइँको मनपर्ने छवि सम्पादकको साथ छवि खोल्न काम गर्दछ।
- शो प्रतीकहरू वेब पृष्ठबाट प्रतीकहरू प्रतिलिपि गर्न अनुमति दिने नयाँ कार्य हो।
- क्लिप प्रबन्धकमा, जब क्लिप स्तम्भमा कुनै पनि वस्तु हाइलाइट हुन्छ तब तपाइँ वरपर नेभिगेट गर्न माथि वा तल तीर कुञ्जीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
- कागजातमा, CopyPaste आइकनमा ट्याप गर्दा पुरानो CopyPaste Pro जस्तै पूर्ण CopyPaste मेनु देखाउनेछ। केही मानिसहरू माथिको मेनु पट्टीबाट मेनु प्रयोग गर्न मन पराउँछन् र कोही तलको डकबाट उही मेनु प्रयोग गर्न मन पराउँछन्। hotkey लाई डकमा रहेको CopyPaste आइकनमा बायाँ क्लिक गर्नुहोस् (माउसको साथ) र २ सेकेन्डसम्म होल्ड गर्नुहोस्। वा डकमा रहेको CopyPaste आइकनमा (माउसको साथ) दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र मेनु तुरुन्तै देखिन्छ।
- नयाँ कार्य - 'url to qr code' जुन तपाइँसँग क्लिपमा url छ र यो कार्य चयन गर्दा यसले QR-Code राख्छ (एक प्रकारको सानो वर्ग बारकोड जुन धेरैजसो स्मार्टफोनहरूले आफ्नो क्यामेराले स्वचालित रूपमा पढ्न सक्छन्)। क्यूआर कोडले त्यो url सँग स्मार्टफोन क्यामेराहरू प्रदान गर्नेछ र एकल प्रेसले ब्राउजरलाई सो url मा लैजान्छ। प्रयोगको उदाहरण: तपाईंसँग चित्र वा तस्बिरहरूको प्रदर्शनी छ भन्नुहोस्, प्रदर्शनीमा सहभागीहरूले चित्रकलाको छेउमा रहेको QR-कोडमा कलाकार, कला र मूल्यसहित बिक्रीको लागि हो कि होइन भन्ने बारे थप जान्नको लागि आफ्नो फोनक्यामलाई लक्षित गर्न सक्छन्।
- नयाँ कार्यहरू - एकल उद्धरणमा डबल उद्धरण र क्लिपको विपरितमा एकल वा दोहोरो उद्धरणहरू सहितको पाठ समावेश छ।
- नयाँ कार्य 'क्रमबद्ध रेखाहरू घट्दै' जब तपाइँसँग प्रत्येक रेखाको अन्त्यमा फिर्ताको साथ पाठका धेरै रेखाहरू छन्। त्यसपछि यसले प्रत्येक रेखाको सुरुमा सबै रेखाहरूलाई वर्णमाला र संख्यात्मक रूपमा क्रमबद्ध गर्नेछ। आरोही 1,2,3...a,b,c र अवरोही उल्टो छ
- ग्रेब ओसीआर र इमोजी सारियो। ती मेनुका अन्य वस्तुहरू जस्तै कार्यहरू हुन्। सबै कार्यहरूले क्लिप ० मा जानकारी राख्छ। त्यसैले, यसले अर्थपूर्ण बनायो र अनुभवमा स्थिरता थप्छ। सोच्नुहोस्, कार्यहरू कार्य मेनुमा छन्।
- 14" वा 16" म्याक ल्यापटपहरूमा निश्चित मुद्दा जसमा निशान छ र जब त्यहाँ धेरै मेनु बार एपहरू छन्, प्रतिलिपि टाँस्नुहोस् निशान पछाडि हराउने छैन।
- धेरै अन्य सुधारहरू, फिक्सहरू र अन्य परिवर्तनहरू।
- धेरै कुराहरू प्रगतिमा छन् र आउँदैछन्। हामी सकेसम्म छिटो जाँदैछौं। छवि ब्राउजर बाटोमा छ।
यदि 'चेक फर अपडेटहरू' इन्स्टल भएन भने, कृपया plumamazing.com बाट एप डाउनलोड गर्नुहोस् र म्यानुअल इन्स्टल गर्नुहोस्। हामीले अपडेटहरूको लागि जाँच गर्ने तरिका परिवर्तन गर्‍यौं। एकचोटि तपाईंले त्यो स्थानमा अद्यावधिक गर्नुभयो भने भविष्यमा काम गर्नेछ।
- प्रतिलिपिपेस्टमा, कमाण्ड विकल्प c, हाल क्लिप ० मा रहेको पाठमा चयन गरिएको पाठ जोड्न प्रयोग गरिन्छ। अब, सानो तर महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमा, त्यो हटकीले डबल ड्युटी गर्छ। जब तपाइँ पहिलो पटक खोजकर्तामा फाइल चयन गर्नुहुन्छ, यसले त्यो फाइलको पथ (पथ भनेको स्थान) लाई क्लिप ० मा राख्छ। त्यसैले, यदि तपाइँको म्याकमा, डेस्कटपमा file.txt भनिने फाइल चयन गरिएको छ र तपाइँ आदेश गर्नुहुन्छ। विकल्प c, यसले यो मार्गलाई क्लिप ० /Users/yourname/Desktop/file.txt मा राख्नेछ।
कृपया पाठ, आदेश विकल्प c चयन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यस क्लिपको सामग्रीहरू हेर्नको लागि पूर्वावलोकन वा टाँस्नुहोस्। त्यसपछि डेस्कटपमा एउटा फाइल चयन गर्नुहोस्, आदेश विकल्प c त्यसपछि पूर्वावलोकन गर्नुहोस् वा त्यस क्लिपको सामग्रीहरू हेर्न टाँस्नुहोस्
- हामीले पेस्टबोर्ड अतिरिक्त डेटासँग व्यवहार गर्ने तरिकामा थप सुधारहरू। हामीले पासवर्ड प्रबन्धकहरू जस्तै 1password र 'org.nspasteboard.ConcealedType' प्रयोग गर्ने अन्यहरूबाट जानकारी लुकाउँछौं जसले पासवर्डहरू लुकाउन र क्लिप इतिहासमा अस्वीकार गर्न प्रतिलिपि टाँस्ने चेतावनी दिन्छ।
- एप अब म्याक ल्यापटप (बेजेल भित्र क्यामेरा भएको म्याक) 'द नच' मा हुँदा कम्प्याटिबिलिटी मोडमा चल्नेछ। मेनुबार एपहरू जस्तै प्रतिलिपि पेस्टले यसलाई सेट गर्दछ ताकि तिनीहरू 'द खाच' पछाडि लुकेका छैनन्। यो 'द खाच' लुकाउने एपहरूको लागि एप्पलको समाधान हो। हामीसँग 14 वा 16" म्याक पावरबुक प्रो छैन त्यसैले कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि यसले तपाईंको लागि कसरी काम गर्छ। धन्यवाद।
- थपिएको परिशिष्ट, आदेश विकल्प c ले चयन गरिएको पाठ क्लिप ० मा थप्नेछ। मेनुमा तपाईंले ** (0x) क्लिप संलग्न ** देख्नुहुनेछ। वा यदि तपाइँ कमाण्ड विकल्प c गर्नुहुन्छ भने यसले भर्खरै चयन गरिएको पाठलाई थप्नेछ र मेनुमा ** (1x) क्लिप संलग्न ** भन्नेछ। कृपया यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
- नयाँ पेस्टबोर्ड प्रकारहरू थपियो। मुख्यतया यदि तपाईंले 1password वा अन्य क्लिपबोर्ड प्रबन्धकहरूबाट प्रतिलिपि गर्नुभयो भने यसले प्रतिलिपि गरिएका पासवर्डहरूलाई क्लिप इतिहासमा जानबाट रोक्नेछ। त्यहाँ अर्को पेस्टबोर्ड पनि छ जसलाई थाहा हुन्छ जब तपाइँ टाइप विस्तार उपकरण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र क्लिपबोर्डका ती प्रयोगहरू क्लिप इतिहासमा पनि देखिने छैनन्। यो यस खण्डमा समयसँगै म्यानुअलमा राम्रोसँग वर्णन गरिनेछ। https://plumamazing.com/copypaste-for-mac-manual-page/#Clip-Types
- नयाँ कार्य। शब्दमा नम्बरहरू। संख्याहरू परिवर्तन गर्दछ, जस्तै 3, एक शब्दमा, तीन।
- 'क्लिप प्रकारहरू' सारियो, जुन संख्यामा बढिरहेको छ, प्रिफ्समा आफ्नै प्यानलमा।
- अपडेट गरिएको 'अपडेटहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्'। तपाईंले फेरि कहिल्यै म्यानुअल जाँच गर्नु पर्दैन।
- कार्यहरू यस तरिकाले काम गर्न परिवर्तन गरिएको छ, तिनीहरूले क्लिप ० को सामग्रीमा कार्य गर्दछ। तपाईंले क्लिप ० बाट टाँस्नुहुन्छ कार्य होइन। सरल। चयनबाट प्रतिलिपि गर्न र कर्सर भएको ठाउँमा टाँस्न प्रयोग गरिने कार्यहरू। यस तरिकाले कार्यहरू अझ सुसंगत, सरल, बुझ्न सजिलो हुन्छ र मानिसहरूलाई आश्चर्यचकित गर्दैन।
- 1 भन्दा बढी अनुक्रमिक ठाउँ हटाउनको लागि नयाँ कार्य
- संख्याहरू हटाउन र गैर-संख्यात्मक क्यारेक्टरहरू हटाउन नयाँ कार्य (अक्षरहरू र विराम चिह्नहरू)
- पहिले उपलब्ध सुविधाहरू फिर्ता ल्याए
- फिक्स्ड विविध मुद्दाहरू। संग खोल्नुहोस् ...
- केहि व्यक्तिहरूको लागि निश्चित मुद्दा जहाँ क्लिप सधैं टाँस्ने र क्लिप ० मात्र टाँस्ने
- यो संस्करण वास्तवमा पहिलेको संस्करणमा फिर्ता जान्छ। त्यसैले पछिल्लो2संस्करणहरूमा थपिएका बग र अन्तरसम्बन्धित सुविधाहरू उपस्थित छैनन् जब हामी त्यो बग बिना र ती सुविधाहरूको साथ अर्को संस्करणमा काम गर्छौं। तपाईको धैर्यताको लागि धन्यवाद।
- बग फिक्स गर्दछ जहाँ यसले सधैं क्लिप ० टाँस्छ। यो वास्तवमा हामीले परीक्षण गरिरहनुभएको नयाँ सञ्झ्याल ल्याउन vv आदेशको कारणले भएको हो। यसलाई अहिलेको लागि हटाइयो।
- केहि नयाँ कार्यहरू थपिएका छन्।
- ध्यान: आउँदै गरेको कार्य आकर्षण !!! यी लागू नभएसम्म ग्रे आउट हुन्छन् (भग्न हुँदैन)। प्रयोगकर्ता सुझावहरूको लागि नयाँ कार्य विचारहरू धन्यवाद। ग्रे आउट, यसको मतलब तिनीहरू अहिले काम गर्दैनन्, तर हामीसँग तिनीहरूमा काम गर्ने समय भएकोले आउँदैछ।
- कार्य मेनु श्रेणीबद्ध बनाउने फोल्डरहरू थपियो। यसले कार्यहरूको वर्तमान फसल र हामीले योजना बनाएका सबै नयाँ कार्यहरू (हाल ग्रे आउट) दुवैलाई एकीकृत गर्न र कार्यहरू फेला पार्न सजिलो बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंले फेला पार्नुहुनेछ कि यसले त्यो मेनु सफा र अधिक बुझ्ने बनाउँछ।
- थपियो, cp मेनुमा 'क्लिप ० कार्यहरू'। यो नयाँ मेनु वस्तुबाट (क्लिप सेटहरू मुनि) प्रतिलिपि पेस्ट मेनुमा तपाईंले क्लिप ० को सामग्रीहरूमा कार्य गर्न कार्य चयन गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई रूपान्तरित मानसँग प्रतिस्थापन गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, 'help' लाई 'HELP' मा रूपान्तरण गर्न UPPERCASE कार्य प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई क्लिप ० मा राख्नुहोस्। यसले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्न प्रयास गर्नुहोस्। जुन यी सबै रफ शब्दहरू भन्दा धेरै सजिलो छ। यो cp मेनुमा कुनै पनि क्लिपमा कार्य मेनु प्रयोग गर्न नियन्त्रण होल्ड गर्नको अतिरिक्त हो।
- गाढा मोडमा अझ राम्रो हेर्नको लागि अर्को वस्तु फिक्स गरियो
'क्लिप प्रबन्धक' लाई 'क्लिप प्रबन्धकहरू' मा परिवर्तन गरियो किनभने यसले धेरै क्लिप प्रबन्धक सञ्झ्यालहरू बनाउन अनुमति दिन्छ र जब तिनीहरू सिर्जना हुन्छन् सबै यो मेनुमा फेला पार्न सकिन्छ।
- स्विफ्ट लिपिहरू र prefs को लागि prefs र बटन हटाइयो। यो एक राम्रो प्रयोग थियो तर हामीले पार गर्न सकेनौं केहि समस्याहरू थिए। हामी अरू केही प्रयोग गरेर बाटोमा काम गर्नेछौं
- थपियो, 'डेटा प्रकार घटाउनुहोस्'। पुरानो cp प्रो मा थियो। यो 99.9% मानिसहरूको लागि होइन। व्याख्या पुस्तिकामा छ। यो अन्य डेटा प्रकारहरूको लागि हाम्रो समर्थनको अन्त्य होइन।
- थपियो, पाठको लागि 'क्रमबद्ध लाइनहरू' र 'मिति र समय'। 'छवि रिसाइज' पनि थपिएको छ र थप क्षमताहरूसँग सुधार र विस्तार गरिनेछ।
यदि तपाइँसँग म्याक थाहा भएका साथीहरू छन् र तपाइँ प्रतिलिपि पेस्टको मजा लिनुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ (यसलाई अझै 1.0 मा विचार गर्दैन), तिनीहरूलाई यो प्रयास गर्न आमन्त्रित गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
महत्त्वपूर्ण - कृपया परिवर्तनहरूको बारेमा पढ्नुहोस्
- आदेश v र क्लिप0को सामग्रीहरू अब हरेक अवस्थामा समान छन्।
- क्लिप संलग्न अब काम गर्दछ! क्लिप ० मा रहेको पाठमा पाठ जोड्न, पाठको चयनमा कमाण्ड विकल्प c गर्नुहोस् र यसले क्लिप ० मा पहिले नै रहेको वस्तु पछि खाली रेखा थप्नेछ र त्यसपछि चयन गरिएको पाठमा पाठ जोड्नेछ। तपाईले चाहानु भएको धेरै पटक यसलाई दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ। सचेत रहनुहोस्, यो सुविधा prefs सेट गर्न संवेदनशील छ। उदाहरण को लागी, 'सधैं सादा पाठ टाँस्नुहोस्' pref ले सबै पाठ जोडिएको सबै स्टाइल हटाउनेछ। यदि मानिसहरूले यो पाठ सुविधा जोड्न मन पराउँछन् र यसलाई धेरै प्रयोग गर्छन् भने हामीले प्रिफ्समा अन्य विकल्पहरूमा प्रत्येक कन्कटेनेट (अन्ततः हामीले त्यो फ्यान्सी शब्द प्रयोग गर्ने) क्लिपहरू बीचको सीमाङ्कनको रूपमा थप्न सक्छौं, खाली रेखालाई बदल्नका लागि, विभाजकहरू बढ्दो संख्याहरू हुन सक्छन्, मिति समय, आदि। यो चाँडै हुने छैन (अझै पनि आधारभूत परिवर्तनहरू) तर हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाई के सोच्नुहुन्छ र तपाईलाई के उपयोगी लाग्छ।
- सादा पाठ टाँस्न pref अब काम गर्दछ। आदेश विकल्प v ले क्लिप ० मा रहेको कुरालाई सादा पाठको रूपमा टाँस्छ।
- 'सधैं सादा पाठ टाँस्नुहोस्' अहिले लगातार काम गर्दछ।
- अँध्यारो मोड समस्याहरूको गुच्छा फिक्स गरियो।
- कार्यहरूमा। धेरै परिवर्तनहरू। धेरै स्क्रिप्ट कार्यहरू अब कम्पाइल गरिएका छन् त्यसैले सामान्यतया 10x छिटो, थप सुसंगत र कम तोड्ने योग्य हुनेछ।
--- 'खुला पाठ' अब संकलित र textedit र अन्य अनुप्रयोगहरूको लागि काम गर्दछ।
--- 'shorten url' अब स्क्रिप्टको सट्टा कम्पाइल गरिएको छ
--- 'खुला पाठ' अब लिपिको सट्टा कम्पाइल गरिएको छ
--- 'extract urls' अब स्क्रिप्टको सट्टा कम्पाइल गरिएको छ
--- सबै 'केस' कार्यहरू अब स्क्रिप्टको सट्टा कम्पाइल गरियो
--- 'इमेलहरू निकाल्नुहोस्' अब स्क्रिप्टको सट्टा कम्पाइल गरिएको छ
--- 'शब्द गणना र आवृत्ति' अब लिपिको सट्टा संकलित
- धेरै विविध। म्यानुअलमा परिमार्जन र अद्यावधिकहरू।
कृपया केहि समयको लागि परीक्षण गर्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्। धन्यवाद!
हामीले अझै पनि परियोजनालाई सामान्य रूपमा र्‍यापमा राखेका छौं तर साथीहरू र रुचि राख्नेहरूलाई प्रतिलिपि पेस्ट उल्लेख गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। अब जब धेरै बगहरू फिक्स गरिएको छ हामी केहि थप मानिसहरूलाई समर्थन गर्न ह्यान्डल गर्न सक्छौं।
- नयाँ अनुवाद कार्य थपियो। 'अनुवाद' देखाउने कार्य पदानुक्रमिक मेनु हेर्नको लागि पाठ क्लिपहरूमा cp मेनुमा नियन्त्रण होल्ड गर्नुहोस्। त्यो क्लिप अनुवाद गर्न स्रोत र लक्ष्य भाषा छनोट गर्नुभयो। अनुवाद बटन ट्याप गर्नुहोस् वा क्लिप ० मा अनुवाद राख्न फर्कनुहोस् वा प्रविष्ट गर्नुहोस्। प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि यसले तपाईंको लागि कसरी काम गर्छ र यो कसरी राम्रो हुन सक्छ।
- लुकाइयो, 'सम्पादन र बचत गर्नुहोस्' कार्य किनभने यो क्लिप प्रबन्धक द्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ।
- 'सधैं सादा पाठ टाँस्नुहोस्' अब काम गर्दछ।
- आदेश विकल्प shift v' मा सादा पाठ टाँस्नुहोस् अब काम गर्दछ।
- Prefs मा थपिएको क्लिप संलग्न। तर अझै कार्यात्मक छैन।
- जब एप सुरु हुन्छ तब sys क्लिपमा के छ त्यसलाई हटाइन्छ जुन पछिल्लो पटक चलेको कपीपेस्ट क्लिप ० मा थियो। भेगासमा के हुन्छ भेगासमा रहन्छ।
- क्र्यासहरूको संख्या फिक्स गरियो
- निश्चित खाली क्लिप उपस्थिति
- क्लिप चयन गर्न मेनुमा एरो माथि वा तल प्रयोग गर्दा, फर्कनुहोस् र फेरि टाँस्न काम प्रविष्ट गर्नुहोस्।
- धेरै अन्य विविध परिमार्जनहरू।
- prefs मा बहिष्कार गर्न जाँदा क्र्यास फिक्स गर्दछ
- cp मेनुमा कहिलेकाहीं देखा पर्ने स्पेस बग फिक्स गर्दछ
- विविध। वस्तुहरू
- सबै क्लिपहरूको लागि नयाँ नम्बरिङ प्रणाली। इतिहास र सबै क्लिप सेटहरूको लागि नम्बर द्वारा टाँस्दै। उदाहरण को लागी, क्लिप सेट4मा, नम्बर3क्लिप टाँस्न को लागी नियन्त्रण 4.3 हुनेछ तपाईले क्रमहरू टाँस्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम उदाहरण लिनुहोस् र क्लिप9मा सबै तरिका टाँस्नु नियन्त्रण 4.3-9 हुनेछ
- निश्चित उद्घाटन क्लिप प्रबन्धक क्र्यास जुन केहि व्यक्तिहरूको लागि भयो
- निश्चित - क्लिप ० मेटाउँदै र त्यसपछि क्लिप ० टाँस्दै मेटाइएको डाटा टाँस्यो।
- क्लिप सेट मेनुबाट नयाँ चयन गर्नुहोस् टाँसिएको केहि पनि अब निश्चित छैन।
कृपया सबै क्लिपहरूको लागि नम्बरिङ प्रणाली परीक्षण गर्नुहोस्। यसले अन्य सुविधाहरूमा नेतृत्व गर्नेछ। हामी सबै टिप्पणी, सुझाव र बगहरूको कदर गर्छौं।
- मनपर्ने मा क्र्यास निश्चित। यो रिपोर्ट गर्ने प्रयोगकर्तालाई धन्यवाद।
- मनपर्ने मा संख्या वृद्धि मुद्दा तय। यो रिपोर्ट गर्ने प्रयोगकर्तालाई धन्यवाद।
- नियन्त्रण h हट कुञ्जी हो जुन खुल्छ र अब इतिहास मेनु बन्द गर्न सक्छ
- cp मेनुमा निश्चित खोज
- नयाँ कार्यहरू थपियो
- साझा गर्नका लागि फिक्सहरू, सादा पाठको रूपमा टाँस्नुहोस्, पाठ सफा गर्नुहोस् र खोल्नुहोस्, क्लिप सम्पादन गर्नुहोस् र बचत गर्नुहोस्।
- डार्क मोडको लागि निश्चित क्लिप प्रबन्धक र cp मेनु
- प्रत्येक क्लिप सेट क्लिप मेनु लागि फरक रंग पृष्ठभूमि थपियो। क्लिप प्रबन्धक मा पनि यो गर्न को लागी आशा। त्यसैले प्रयोगकर्ताहरूले सजिलै थाहा पाउन सक्छन् कि तिनीहरू कुन क्लिप सेटमा छन्
- मिश्रित धेरै पृष्ठभूमि सुधारहरू र बग समाधानहरू।
- prefs मा exclude प्रयोग गर्दा केहि कन्फिगरेसनहरूको लागि निश्चित क्र्यास।
- मुख्य मेनुमा कुनै क्लिप नभएको र हामीले कुनै पनि क्लिप खोज्दा खोजी क्षेत्रको चौडाइ संकुचित हुँदा समस्या समाधान भयो।
हो, खोज फिल्ड फिक्सिङ, जुन हाल पहिलो वर्ण छुटेको छ, चाँडै फिक्स गरिनेछ। यो फरक मुद्दा हो।
- केहि व्यक्तिहरूको लागि स्टार्टअपमा निश्चित क्र्यास
- prefs मा iCloud बन्द हुँदा पुनरावर्ती सिंक संवाद फिक्स
- हट कुञ्जीहरूसँग वास्तविक आदेश, नियन्त्रण, विकल्प वा सिफ्ट र नियमित वर्ण कुञ्जीहरू प्रदर्शन गर्न राम्रो कन्ट्रास्ट छ।
- पुरानो प्रतिलिपि पेस्ट प्रो बाट आफ्नो अभिलेखहरू आयात गर्ने कसैको लागि भएको निश्चित क्र्यास। यदि तपाइँसँग पहिले समस्या थियो भने कृपया पुन: प्रयास गर्नुहोस्।
- यसलाई स्पष्ट बनाउन केही संवादहरूमा शब्दहरू परिवर्तन गरियो
- नयाँ क्लिप सेटहरूलाई अब क्लिप सेट 1, क्लिप सेट2नाम दिइएको छ।
यदि तपाइँ प्यालेट लिन चाहनुहुन्छ भने क्लिप प्रबन्धक प्रयोग गर्नुहोस् र दायाँ र बायाँ छेउ लुकाएर र केन्द्रमा क्लिपहरू देखाएर समायोजन गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई तपाईले चाहानु भएको साइजमा तन्काउनुहोस् र यसलाई मनिटरको एक छेउमा राख्नुहोस्। त्यसोभए तपाईंले क्लिपलाई टाँस्न वा मेल वा जुनसुकै एपमा ड्र्याग गर्न क्लिप ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंसँग दुर्घटना छ भने। तपाईंले सम्झनुभएको विवरण र स्क्रिनसट (हरू) हामीलाई पठाउनुहोस्, क्र्याशलगहरू पनि मद्दत गर्नुहोस्। दुर्घटना पछि ती फेला पार्न कन्सोल एप प्रयोग गर्नुहोस्।
- चयन गरिएको क्लिप iCloud मा बचत गर्न र क्लिप ० मा url राख्नको लागि 'icloud मा बचत गर्नुहोस्' नयाँ कार्य। पाठको साथ प्रयास गर्नुहोस् (छविहरू र अन्य सबै प्रकारका स्रोतहरू चाँडै थपिनेछन्)! यो सहकर्मीहरूलाई क्लिपहरू र अन्य वस्तुहरू साझेदारी गर्न प्रस्ताव गर्ने सुरुवात हो। पछिल्लो0दिनमा iCloud मा साझेदारी गरिएका क्लिपहरू त्यसपछि Apple द्वारा मेटाइन्छ। त्यसैले, यो साझेदारी अस्थायी हो। यदि तपाइँ यसलाई पहिले नै मेटाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाइँको म्याकको iCloud फोल्डरमा जानुहोस् र 'CopyPaste' फोल्डरमा हेर्नुहोस्। थप आउन...
- cp prefs मा परिमार्जन योग्य हट कुञ्जीहरूको रंग अब (आशा छ) रङ ब्लाइन्ड भएकाहरूलाई मद्दत गर्नको लागि गाढा निलो भएको छ। यदि कन्ट्रास्ट पर्याप्त छैन भने कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
- एक दुर्घटना फिक्स।
यदि कसैसँग दुर्घटना भएको छ भने कृपया हामीलाई कन्सोल लग पठाउनुहोस्। सामान्य रूपमा, सबै प्रतिक्रिया धेरै स्वागत छ। बगहरू, सुझावहरू, टिप्पणीहरू, म्यानुअलका लागि सुधारहरू, आदि सबैले यसलाई राम्रो एप बनाउन मद्दत गर्नेछ।
- क्लिप साइज डाटा अब सही छ
- धेरै url को क्लिप डाटा अब सही रूपमा पाठ रूपमा लेबल
- ठूला फाइलहरूको साथ बीचबलिङ रोक्नको लागि मुख्य मेनु सुधार गरियो
- तपाईंले cp मेनुमा क्लिपमा ट्याप गर्दा कर्सर स्थितिमा टाँस्न पूर्वनिर्धारित सेटिङ सेट गरियो। हामी यसलाई जस्तै राख्न सिफारिस गर्दछौं। क्लिप ट्याप गर्नुहोस् र कर्सर भएको ठाउँमा टाँस्नुहोस्।
- हामीले खोज/फिल्टर मेनुलाई नियमित खोज क्षेत्र जस्तै बनाउन धेरै समय प्रयास गर्‍यौं तर यो कारणको लागि हो (गेब्रिएल)।
- इतिहास अब सधैं क्लिप सेट मेनु को शीर्ष मा
- क्लिपको लागि कार्य मेनुमा, 'क्लिपमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्' लाई 'क्लिपमा सार्नुहोस्...' मा परिवर्तन हुन्छ र कुनै पनि क्लिपलाई कुनै पनि क्लिप सेटमा सारिन्छ। सबै क्लिप सेटहरू भर्नको लागि उपयोगी। इतिहास र अन्य क्लिप सेटहरू बीच क्लिपहरू ड्र्याग गर्न क्लिप प्रबन्धक वा3खोल्ने अर्को तरिका हो।
- cp मेनुबाट फिल्टर गर्दा, क्लिप सेटहरू र क्लिप प्रबन्धकहरू अब मेनुबाट लुकेका छैनन्।
- ब्याकअपमा अब स्वत: ब्याकअप गर्ने विकल्पहरू समावेश छन्
- 'क्लिप प्रबन्धक' पदानुक्रमिक मेनु परिवर्तन गरियो, 'थप्नुहोस्/सम्पादन गर्नुहोस्' भन्नको सट्टा तपाईंले एक भन्दा बढी क्लिप प्रबन्धक थप्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिनको लागि। जुन अन्य क्लिप सेटहरूमा क्लिपहरू तान्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्लिप प्रबन्धक पनि तपाइँ पाठ र url क्लिप सम्पादन गर्न सक्ने ठाउँ हो भनेर प्रदर्शन गर्न। आशा छ हामी भविष्यमा ग्राफिक्स सम्पादन गर्न सक्षम हुनेछौं तर त्यो धेरै समावेश छ तर साँच्चै राम्रो हुनेछ।
- अब यदि तपाईंले क्लिप प्रबन्धक छोड्दा वा अर्को क्लिपमा जाँदा क्लिप प्रबन्धकमा सम्पादन गर्नुहुन्छ भने, सबै परिवर्तनहरू स्वचालित रूपमा बचत हुन्छन्। क्लिप ० र उच्च सबै साना पाठ सम्पादनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- अब तपाइँ क्लिप प्रबन्धकमा पाठ सम्पादन र बचत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले अर्को क्लिपमा स्विच गर्दा बचत स्वचालित हुन्छ।
- अब ब्याकअप गर्दा सबै क्लिप सेटहरू ब्याकअप हुन्छन्। prefs को उन्नत ट्याबबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ।
- सामान्य प्रिफ्समा नयाँ ब्याकअप प्यानलले केही गर्दैन र सक्रिय छैन।
- माउसको दायाँ बटन तल समात्नु अब नियन्त्रण होल्ड गर्ने जस्तै छ। cp मेनुमा प्रयोगको लागि
- अब पुरानो प्रतिलिपि पेस्ट प्रोबाट सबै अभिलेखहरू आयात गर्दछ र प्रत्येक अभिलेखको लागि क्लिप सेटहरू सिर्जना गर्दछ। त्यसैले सबै क्लिप सेटहरू र सबै प्रयोगकर्ता क्लिपहरू अब एउटै नामका क्लिप सेटहरूमा आयात गरिएका छन्।
- पुरानो cp बाट नयाँ pref थपियो। 'क्लिप ० मा अन्तिम टाँसिएको क्लिप सार्नुहोस्'
- आइक्लाउड (ठूलो) मा समक्रमण अब समाधान भयो
- 'पेस्ट टेक्स्ट क्लिपहरू प्लेन बिना स्टाइलहरू' प्रिफलाई जाँच गर्न सकिन्छ ताकि सबै टाँसहरू शैलीहरू बिना नै छन्।
- 'क्लिप इतिहासमा क्लिपको अधिकतम संख्या' दुवै cp मेनु र क्लिप प्रबन्धकमा लागू हुन्छ
- प्रतिलिपि पेस्ट मेनुमा क्लिपमा url/links खोल्न, shift कुञ्जी होल्ड गर्नुहोस् र क्लिप ट्याप गर्नुहोस्। यसले शिफ्ट कुञ्जीलाई समातेर र क्लिपमा कर्सर समातेर सबै क्लिपको पाठ, स्प्रेडसिट, ग्राफिक्स र url/लिङ्कहरू सहित पूर्वावलोकन गर्न अनुमति दिन्छ। काेशिस गर।
- नक्कलहरू अब हटाइयो। prefs:clips प्यानलमा pref, 'डुप्लिकेट क्लिपहरू मेटाउनुहोस्।'
- pref 'क्लिप इतिहासमा क्लिपहरूको अधिकतम संख्या' अब ठीकसँग काम गर्दैछ।
- विविध। अन्य फिक्सहरू
- निश्चित मुद्दा जब क्लिप सेट हटाइयो तर केहि क्लिप छोड्छ
- हटाइएका डुप्लिकेट क्लिप सेटहरूको निश्चित मुद्दा अझै पनि देखाउँदै।
- क्लिप प्रबन्धकमा अद्यावधिक नभएको ह्यास मान फिक्स गरियो।
- क्र्यास ठीक गर्न प्राथमिकताहरू बहिष्कार पृष्ठ परिमार्जन गरियो।
- मुख्य मेनु कहिलेकाहीँ अड्किएको बेलामा सुधारिएको कोड एप्लिकेसन सुरु हुन्छ।
- स्क्रोल व्हील समस्या समाधान गर्न सुधारिएको MainMenu वस्तुहरू रेखाचित्र।
- केहि गाढा मोड काम सकियो
- विविध। परिवर्तनहरू
- मुख्य मेनु र स्क्रोलिङ खोल्दा प्रयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट गरिएको फिक्स्ड क्र्यास।
- महत्त्वपूर्ण: केही राम्रो समाचार र खराब समाचार। नराम्रो खबर: ०.९.१५ बाट बाहिरिँदा मितिबेस परिवर्तनको कारणले गर्दा तपाईंले ०.९.१६ मा सर्दा सबै क्लिप सेट र क्लिपहरू गुमाउन सक्नुहुन्छ: राम्रो समाचार: तपाईंले प्रतिलिपि पेस्ट प्राथमिकताहरू: उन्नत: निर्यात/मा गएर पहिले ०.९.१५ बाट ब्याकअप गर्न सक्नुहुन्छ। जगेडा क्लिपहरू र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण क्लिपहरू र क्लिप सेटहरू जगेडा गर्न त्यो बटन थिच्नुहोस्। त्यसैले, तपाईंले 0.9.15 संस्करण छोड्नु अघि ब्याकअप गर्नुहोस्।
- प्रणालीको तल बायाँमा रहेको संस्करण र निर्माणमा क्लिक गर्दा: प्राथमिकता प्यानलले ती दुवै वस्तुहरूलाई क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्दछ (गब्रिएललाई धन्यवाद) र तपाईंलाई plumamazing.com साइटमा प्रतिलिपि गर्नको लागि चेन्जलग पृष्ठमा ब्राउजरमा लैजान्छ।
- मेनुमा स्क्रोल व्हील मुद्दा फिक्स गर्नको लागि प्रारम्भिक प्रतिबद्धता।
- प्रतिलिपि पेस्ट सुरु नहुनेहरूको लागि ठीक गर्नुहोस्
- cp मेनु मेनुमा परिवर्तन गर्नुहोस् दुबै क्लाउड आइकन र एप नाम 'कपीपेस्ट आईक्लाउड जडानको आधारमा रंगीन छन्। क्लाउड आइकन हरियो देखाउँछ कि तपाइँ iCloud मा साइन इन हुनुहुन्छ। नामको हरियोले तपाइँलाई प्राथमिकताहरूमा आईक्लाउड अन गरेको संकेत गर्दछ।
- फिक्स्ड मुद्दा स्पार्कल अपडेटहरू संवादको लागि जाँच गर्नुहोस् धेरै अगाडि देखाउँदैन।
- क्लिप प्रबन्धकमा देखाउनको लागि विकल्प + क्लिक प्रयोग गरेर मेनुबाट क्लिप चयन गर्दा क्र्यास फिक्स गर्नुहोस्।
- चयन गर्नुहोस् क्लिप + नियन्त्रण + मेटाउनले cp मेनुमा क्लिप मेटाउनेछ तर त्यहाँ अझ राम्रो सजिलो थप स्पष्ट तरिका हुनुपर्छ।
- क्लिप प्रबन्धकमा क्लिप सेट चयन गर्दा पाठ सम्पादकमा अद्यावधिक नभएको पाठ। अब फिक्स
- नेटवर्किङ र परीक्षण मा धेरै समय खर्च। सिङ्किङ macs बीच परीक्षण गर्न सकिन्छ।
- क्लिप सेटहरू मुख्य cp मेनुको शीर्षमा थपियो
- क्लिप प्रबन्धक मुख्य cp मेनुको शीर्षमा थपियो
- क्लिपमा एक पटक आदेश र ट्याप गर्नुहोस् यसलाई सादा पाठ/कुनै शैलीहरूको रूपमा टाँस्नुहोस्
- धेरै संवादहरू अपडेट गरियो
- म्यानुअल अपडेट गरियो र हटकीहरूको एउटा उपयोगी तालिका थपियो
- आयात र निर्यात क्लिप सेट सिद्ध
- पुरानो प्रतिलिपिप्यास्ट प्रोबाट अभिलेख र इतिहास आयात गर्नाले अब यो नयाँ प्रतिलिपिमा उनीहरूका लागि क्लिप सेटहरू सिर्जना गर्दछ।
- कमाण्ड कुञ्जीबाट विकल्प कुञ्जी प्रयोग गर्न परिवर्तन गरियो र क्लिप प्रबन्धकमा खोल्नको लागि क्लिप ट्याप गर्नुहोस्।
- क्लिप सेट पुन: नामकरण गर्न सकिन्छ
- क्लिप सेट इतिहास र मनपर्ने बाहेक मेटाउन सकिन्छ। सबै क्लिप सेटहरूले तिनीहरूको सामग्रीहरू प्रिफ्समा उन्नत ट्याबबाट खाली गर्न सक्छन्
- धेरै अन्य विविध परिवर्तन र सुधारहरू
सबै सुझाव र प्रतिक्रिया को लागी धन्यवाद। कृपया यसलाई आउँदै राख्नुहोस्।
प्रत्येक टिप्पणी, तपाईंको दृष्टिकोणबाट, हामीलाई सबैका लागि cp कसरी राम्रो बनाउने भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
- प्रतिलिपि पेस्ट मेनुमा क्लिपमा आदेश र ट्याप गर्दा क्लिप प्रबन्धकमा क्लिप खोल्छ
- म्यानुअल अद्यावधिक गरिएको छ
- अब नयाँ स्पार्कल प्रयोग गर्दै जुन edsa प्रयोग गर्दछ।
- थपिएको पुश सूचनाहरू
- अपडेटहरूको लागि चेकमा सानो फिक्स
- ग्रेब टेक्स्ट/ओसीआरले नतिजाहरूलाई क्लिप प्रबन्धक क्लिप ० मा राख्छ जुन टाँस्न सकिन्छ। वा नतिजा टाँस्न प्रयोग ० लाई नियन्त्रण गर्नुहोस्।
- डुप्लिकेटहरू मेटाउनमा परिवर्तनहरू
- निश्चित चयन मुद्दा
- उपकरण सुझावहरू थपियो
- प्राथमिकताहरूमा: प्रणाली नयाँ 'अपडेटहरूको लागि स्वचालित रूपमा जाँच गर्नुहोस्' खोल्न आवश्यक छ। यसलाई ड्रप डाउन मेनुमा नियमित रूपमा (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक) जाँच गर्न सेट गर्न सकिन्छ। हामी बिटा परीक्षकहरूको लागि दैनिक सुझाव दिन्छौं
- अन्य साना समाधानहरू।
- पूर्वनिर्धारित रूपमा डुप्लिकेटहरू मेटाउनुहोस्
- नयाँ 'loginitems' प्रयोग गर्दै
- संवादमा पाठ परिवर्तनहरू
- अन्य किबोर्डहरूमा दायरा प्रयोग गर्न निश्चित टाँस्ने
- बचत अब नि: शुल्क परीक्षणको लागि काम गर्दछ (गम्भीर रूपमा) तर तपाईंले प्राथमिकताहरूमा चेकबक्स जाँच गर्नुपर्छ। prefefences:general:clips त्यसपछि चेकबक्स 'छाड्दा क्लिपहरू बचत गर्नुहोस्'
- अब 'dvorak' जस्तै 'qwerty' भन्दा अन्य किबोर्ड काम गर्दछ
- क्लिप प्रबन्धक भित्र प्रतिलिपि गर्न निश्चित क्षमता
- विविध। परिवर्तनहरू। संवादमा सुधारिएको पाठ र सुधारिएको म्यानुअल।
- विविध। 1 महिना निःशुल्क थप्ने सहित परिवर्तनहरू।
- नवीनतम स्पार्कलमा अद्यावधिक गर्नुहोस्
- नयाँ संवादहरू
- intel र m1 मा काम गर्दछ
- इमोजी प्रबन्धक
- प्रतिलिपि सुरक्षा थपियो
- अन्य सुधारहरू
- notarization थपियो।
- मेनु आकार समायोज्य
- हटकी प्रिफ्स सुधारियो
प्रतिलिपि पेस्ट म्यानुअल
म CopyPaste 2022 सँग कत्ति खुसी छु भन्नको लागि लेख्दैछु! मैले धेरै वर्षको लागि CopyPaste प्रयोग गरेको छु, र यो सँधै उपयोगी भएको बेला, यो नयाँ संस्करणले खेललाई पर्याप्त रूपमा बढायो! मेरो नयाँ मनपर्ने OCR को प्रतिलिपि हो - यसले अनन्त कार्य-वरिपरिको सहारा बिना मलाई घण्टा बचत गरेको छ। iCloud भण्डारण र विस्तारित क्लिप सेटहरूले सम्झौतालाई सील गरेको छ। CopyPaste सधैं पैसाको लायक थियो। अब यो एक निरपेक्ष सौदा हो !!
डा. रोबर्ट ए जोन्सन जूनियर
Copypaste एउटा उत्कृष्ट कार्यक्रम हो र म यसलाई हरेक दिन धेरै प्रयोग गर्दछु...वास्तवमै उपयोगी उपकरण, र म तपाईलाई यसको लागि बधाई दिन्छु!✌️ तपाई र टोलीलाई शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद !!